lokungeniswa Preheating aluminium flanges yi-UHF lokungeniswa heater
Ikhaya / Izicelo / Ukushisa Ukushisa / induction Ukushisa ama-aluminium flanges
Isigaba: Ukushisa Ukushisa Tags: i-aluminium flange, i-aluminium induction preheater, Ukushisa kwe-aluminium induction, thenga i-aluminium flanges heater, ama-flanges, Ukushisa i-aluminium flange, induction aluminium flanges heater, ukushiswa kwe-aluminium enqenqemeni, ukushisa ukushisa aluminium, ukukhishwa kwesilwane, induction preheating aluminium, induction preheating flanges
Injongo: Induction Ukushisa i-aluminium inhlangano yesicelo sangaphambi kokushisa.
Material : Aluminium flanges (2.35 ”by 4.83” / 60 mm by 133 mm) kanye (3.35 ”by 6.91 / 85 mm by 176 mm)
Amashubhu e-Aluminium (.63 ”/ 16 mm OD) kanye (.92” / 23mm OD)
Ukushisa: 600ºF / 315ºC
-DW-UHF-20kW ukufakwa kokushisa uhlelo, ifakwe ikhanda lokusebenza elikude eliqukethe ama-capacitor amabili we-1.5μF okuphelele kuka .75 μF
- An ukufakwa kwe-coil yokushisa eklanyelwe futhi ithuthukiswe ngqo kulolu hlelo lokusebenza.
Kusetshenziswa ikhoyili ye-helical ezungeze izingxenye ezincane, ezibanjwa nge-vise ngenkathi i-flange ifakwa kwikhoyili. Izingxenye ezincane ziyafudunyezwa ngemizuzwana engama-20 futhi zifinyelela izinga lokushisa olifunayo endaweni ehlanganisiwe.
Kwenziwa ikhoyili enkudlwana ye-helical ukushisa umhlangano omkhulu we-aluminium, odinga izinga lokushisa olufunayo elifanayo. I-
ikhoyili ishisa umhlangano omkhulu ngokucushwa kokunikezwa kwamandla okufanayo, kepha idinga amandla amaningi. Lo mhlangano
ukufudunyezwa imizuzwana engama-20 futhi kufinyelela izinga lokushisa olifunayo.
Amakhoyili amabili ama-helical abekwe ngaphansi komphetho wangaphandle wengxenye ngayinye. Lokhu kuzodingeka ukucwilisa ukushisa ngaphakathi kwezingxenye ezimbili.
-Umkhiqizo ophezulu wokugcina wekhwalithi vs. usebenzisa isithando somlilo esivulekile somlilo. Amahhavini ayazwela ekushiseni kwe-ambient kanye nomswakama futhi athambekele ekuvezeni imiphumela engalingani
- Ngisho nokusatshalaliswa kokushisa
- Ukushisa okusheshayo, okuhlanzekile ngokunemba kwezikhathi zomjikelezo osheshayo